Sawirro: Madaxweynaha Filibiin Oo Amaray in la Burburiyo 30 Gaari Nuuca Qaaliga Ah.
Wednesday February 07, 2018 - 20:58:40 in Wararka by Super Admin
Wadanka Filibiin waxaa ka dhacay howlgal dad badan ka yaabiyay kadib markii ay dowladdu meel fagaare ah ku burburisay tobaneeyo gaari oo ah nuuca qaaliga ah ee ay isticmaalaan dadka maalqabeennada ah.
Go'aan kasoo baxay madaxweynaha Filibiin ayaa lagu burburiyay 30 gaari oo ah nuuca raaxada balse lacago Boqolaal Milyan oo dollar ah lagusoo iibiyay.
Rodrigo Roa Duterte oo ah madaxweynaha Filibiin ayaa goob joog ka ahaa munaasabad lagu burburinayay gaadiidka, Baldoosarro ayaa ladulmariyay gaadiidka si aan wax nacfi ah looga helin.
Madaxweynaha Filibiin ayaa soo saaray wareegto mamnuuc ka dhigaysa in gaadiid si sharci darra ah lagusoo geliyo wadanka taas oo ka dhigan in tallaab adag laga qaadayo dadka isku daya in ay ladhuuntaan canshuurta dowladda.
30-ka Baabuur ee laburburiyay ayaa lagu khasaaray lacag dhan 2 Milyan iyo laba boqol kun oo dollar, dowladda Filibiin ayaa qorshahan ku cabsi gelinaysa dadka ku fikiraya in alaabo ganacsi wadanka soo geliyaan iyagoo ka dhuumanaya canshuurta dowladda.
Warbaahinta afka dowladda ku hadasha ayaa tallaabadan ku tilmaamtay mid qeyb ka ah musuq maasuqa baahsan ee kajira waaxda canshuuraha qaranka
Wasiirka arrimaha gudaha Filibiin ayaa sheegay in Burburinta gaadiidkan ay u adeegsanayaan qalab si xataa aan wax faa'iido ah uga harin, waxaana burburaya matoorrada iyo baalta lamayeeriga gaariga.
Rodrigo Roa Duterte Madaxweynaha Filibiin ayaa sanaddii lasoo dhaafay gacantiisa ku dilay kumanaan katirsan dadka Daroogada mamnuuca ka ah wadankaas ka ganacsada.
Dagaal Gaari Gaashaaman looga qabsaday Ciidamada Dowladda oo ka dhacay deegaan katirsan Sh/Hoose.